Etu ị ga - esi họrọ akwa ụlọ a na - eji akwa akwa - Dafne Italian Design
Home Ndụmọdụ na n'ike mmụọ nsọ Etu ịhọrọ otu ụlọ ịsa ahụ eji emebekarị ihe
Oghere na-enweghị ike ịhapụ enweghị bụ ebe a na-asa akwa.
Mkpa idozi ihe niile na inwe otu ebe ị ga - asa akwa gị.
N'akụkụ a nke ụlọ, nhazi na usoro bụ isi; ya mere odi nkpa ịhọrọ akwa akwa ọfụma, igwe na-asa mmiri na akwa mmiri na ọkpọọcha ga-adabara oghere gị.
Anyị na Dafne Italian Design nyere echekwa e ngwá ụlọ maka akwa ákwà ahọpụta ụdị Italiantali ndị a ma ama na ndị a ma ama n'etiti ụlọ dị iche iche na ngwa ndị na-enye ihe eji arụ ọrụ. Ikike dị mfe, modular na mgbanwe ihe dị iche iche na-ekwe nkwa nkwonkwo zuru oke na ọrụ a ga-eji rụọ ụlọ ịsa ahụ.
Site na ime nhọrọ ziri ezi, ọ ga-ekwe omume ịmepụta akụkụ ịsa akwa gị n'ụlọ ịsa ahụ ma ọ bụ iji, ọ bụrụ na ọ dị, ime ụlọ pụrụ iche.
Otu esi ahọpụta akwa ụlọ ịsa ahụ zuru oke maka mkpa gị
Roomlọ ọ bụla dị n’ụlọ ahụ ka a ga-enyerịrị ya nlekọta na ụtọ ya n’etinyeghị ya arụ ọrụ. Nhọrọ nke arịa ụlọ, ngwa na nhazi nke oghere na-enyere aka mee ka ebe ọ bụla dịkwuo mfe, n'agbanyeghị obere.
Otu anya bụ n'ihi ebe a na-asa akwa, enwere ike idozi ya na usoro dị iche iche kwekọrọ na mkpa gị.
Onweghi ihe nabatara n’ulo a na-anabata nke na-adighi ehota uzo mmadu si ebi ndu ya.
Enwere ọtụtụ amụma ịhọrọ maka otu akwa akwa, dị ka ụlọ ndị ọzọ dị na ụlọ, na-ejikwa omume gị.
Hasnye nwere nnukwu oghere dịnụ ga-enwe nhọrọ karịa ma ọ gaghị enwe nsogbu ịnye ụlọ ịsa ahụ ihe niile dị ya mkpa.
Ndị ga-emerịrị na mpaghara pere mpe, ha ga-elekwasị anya ngwa ihe eji egbo mkpa.
Ikwunye ebe a na-asa akwa nwere otutu ngwọta: site na akwa akwa, Ọ bara uru iji gbochie igwe ịsa ahụ na igwe akọrọ (nke a ga-ezo nke ọma na-eme ka ọ bụrụ ihe niile), maka obere mmebe ụlọ ịsa ahụ nke nwekwara ike iji dị ka arịa ụlọ ịsa ahụ dị mfe.
Nkata nkata dị na ihe dị iche iche na agba bụ ihe dị mkpa, enwere ike ịchọta ya n'ime akwa akwa ma ọ bụ n'èzí ma nwee ike ịbụ akwa ma ọ bụ ọla.
Ọ bụrụ na oghere ị nwere ike ịrara nye mpaghara ịsa akwa gị buru ibu enwere ike Họrọ arịa ụlọ ị ga-esi hazie ihe na-eme akpa mmiri na ihe ọ bụla enwere ike iji sachaa uwe.
Urnmepụta ebe a na-asa ákwà
Enwekwara ọtụtụ ụzọ iji mee ka ịsa ahụ bụrụ ụlọ ịsa ahụ mara mma n'akụkụ niile: ọmụmaatụ nwere ike ịbụ chi sinks maka ịsa akwa pere mpe karịa ọkwa nkịtị, mana enwere ike iji ya maka ịdị ọcha.
ndị a sinks na akwa aka, Obere ma na-ekwekọrịị na oghere pere mpe, ha na-enye ohere iji mpaghara niile dịnụ n'ụzọ dabara adaba na ngwa ọ bụla. ngwá ụlọ kwa na-asa ákwà, n’emebighị ohere bara uru, nke na-adịwanye mkpa n’ụlọ ndị nke ugbu a.
Lee nhọrọ anyị nke akwa ịsa akwa na akwa nhicha na akwa igwe akwa, dee anyị mkpa gị, anyị ga-ezitere gị ụgwọ ọrụ ụlọ ịsa ahụ na-enweghị aka ị ga-enye, ha ga-enwe ike ịdụ ndụmọdụ gị maka azịza kachasị mma maka gị mkpa maka gburugburu ebe ịsa akwa. . Pịa ebe a ka ị hụ nchịkọta mkpokọta anyị niile.
Ndị ọrụ anyị dị n'aka gị zuru oke maka obi abụọ na ozi.
Kpọọ anyị na ọnụọgụ anaghị akwụ ụgwọ 800 66 25 83 maka ịmatakwu ozi ma ọ bụ detara info@dafnedesign.com. Anyị na-eche gị!
ANY PRODU NA-EGO AKWUKWỌ AKW LAKWỌ AH LAR LA
Nke a bụ ụfọdụ ọrụ anyị mepụtara maka ọtụtụ ndị ahịa anyị, rịọ maka ntanetị n'efu ma egbula oge ịkpọtụrụ anyị ajụjụ ọ bụla!
Ndi okacha amara nke Italia bu ndi aka gi no ime ka ihe doo anya! Kpọọ anyị n'efu: 800 66 25 83
ndị na-ahụ maka ọrụ anyị ga-enwe obi ụtọ ịge ntị na mkpa gị ma nye gị nsụgharị ọdịnala n'efu.